लिग आयोजनाबारे एन्फाविरुद्ध किन बोल्दैनन् कोही ? – Khel Dainik
लिग आयोजनाबारे एन्फाविरुद्ध किन बोल्दैनन् कोही ?
मंसिर २५, २०७४ | (PostaComment)
काठमाडौं (खेलदैनिक) । नेपाली खेलकुदमा आफ्नो छुट्टै पहिचान र लोकप्रियता बोकेको फुटबल खेलप्रति अहिले आएर कसैले पनि वास्ता गर्न छोडेको आभास हुन थालेको छ ।
बिगत दुई बर्षदेखि नेपाली फुटबलको मेरुदण्ड मानिएको राष्ट्रिय लिग हुन सकेको छैन । यसबारे नेपाली फुटबलको नियमनकारी संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) सँग ठोस जवाफ पनि छैन वा दिन चाहँदैन ।
निश्चित समय सिमाभित्र किन लिग गराउन नसकेको हो ? तयसबारे नेपालभरीका ए, बी र सी डिभिजनका क्लब तथा खेलाडीहरुले एन्फाविरुद्ध किन केही बोल्न नसकेको हो ? त्यो पनि बुझ्न सकिएको छैन ।
फुटबल खेलाडीहरुको हक अधिकारबारे आवाज उठाउन कै लागि भनेर फुटबल सम्बद्ध केही क्रियाशील संघसंस्थाहरु पनि छन् । तर उनीहरु पनि फुटबल खेलाडीहरुको मागबारे आवश्यक पहल गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यहाँ रेफ्री एशोसिएसन छन्, प्रशिक्षक एशोसिएसन छन्, महिला फुटबल एशोसिएसन छन् तर उनीहरु फुटबल खेलाडीहरुको हक अधिकारबारे बोल्नुको साटो गुमानम सरह एक सिमित कोठाभित्र थन्किएर बसेका छन् ।
मुलुकमा केही यस्ता ठूलो सञ्चारमाध्यमहरु छन्, जो फुटबल सम्बन्धी यस्ता गतिविधीहरुलाई मुख्य समाचारका रुपमा आम जनमानससामू पुर्याउन सक्दैनन् वा चाहन्न् ।
रह्यो नेपाल सरकारको कुरा । जसलाई खेलकुदको सामान्य जानकारी छैन् र जसले खेलकुदको महत्व बुझ्न सकिरहेका छैनन्, त्यस्ताबाट हामी के आश गर्न सक्छौं ? यदि सरकार वास्तवमै नेपाली फुटबलप्रति गम्भिर हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म एन्फालाई निश्चित समयमै लिग गराउन दबाब पक्कै पनि दिन्थ्यो होला ।
अहिले देशमा कम्तिमा पनि पाँचसय भन्दा बढी फुटबल खेलाडीहरु बेरोजगार छन् । दुई बर्षयता तीस भन्दा बढी खेलाडीहरु सुरक्षित भविष्यका लागि विदेशिन बाध्य भईसकेका छन् ।
नेपाली फुटबलको यो गिर्दो अवस्थाबारे एएफसी र फिफा पनि गम्भिर छैन । होस पनि कसरी ? उनीहरु त मलेसिया र स्वीजरल्याण्डमा रहेका आफ्नो मुख्यालयमा वातानुकुलीत कक्षमा डलरसँगै आरामले रमाइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा एन्फाबाट सेवा सुविधा पाइरहेका छन् । कम से कम उनीहरुले एन्फालाई राष्ट्रिय लिग आयोजनाबारे दबाद दिनुपर्ने हो, तर त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
कर्ण लिम्बु, निराजन खड्का जस्ता केही राष्ट्रियस्तरका फुटबलरहरु छन्, जो एन्फालाई लिगको महत्वबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै र फुटबल गतिबिधीलाई नियमित गर्न समय–समयमा झकझकाउने गर्दछन् । तर औंलामा गन्न सकिने यस्ता खेलाडीहरुको आवाज सुन्ने कसले ? बुझ्ने कसले ?
के तपाईंलाई नेपाली खेलाडीहरुको सुनिश्चित भविष्यका लागि नेपाल सरकार र एन्फाले केही ठोस कदम चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ? क्लबहरुलाई आर्थिक र प्राविधिक रुपमा पनि सक्षम बनाउने जिम्मेवारी एन्फा र सम्बन्धित निकायको हो । तर यसबारे क्लब पनि गैरजिम्मेवार हुनुहुँदैन । उनीहरुले पनि आफूले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी गम्भिरताका साथ पूरा गर्नुपर्दछ ।
नेपाली फुटबलमा केही यस्ता ए डिभिजन क्लबहरु पनि छन्, जसलाई राष्ट्रिय लिग आयोजना नभएर खुशी छन् । त्यस्ता क्लबहरको नजरमा लिग नभएपछि आर्थिक व्यवभार पनि कम हुने बुझाई छ ।
देशमा प्रर्याप्त खेल मैदान र मिनी स्टेडियम हुँदा हुँदै पनि एन्फाले नियमित लिग आयोजना गर्न नखोज्नु वा नसक्नु आफैमा लाजमर्दो र आश्चर्य छ ।
यति हुँदा हुँदै पनि यदि नेपालका फुटबल खेलाडीहरु, क्लबहरु, प्रशिक्षकहरु र फुटबलसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुले राष्ट्रिय लिग निश्चित समय मै नियमित सञ्चालन गर्न एन्फा र सरकारलाई दबाब दिन सके सम्बन्धित निकायले पक्कै पनि लिग आयोजनाका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछन् ।
तर दुःखको कुरा आफ्नो स्वार्थ गुम्ने डरले यी कसैले पनि एन्फाविरुद्ध आवाज उठाउन खोज्दैनन् वा सक्दैनन् ।
← शानदार जितका साथ मनाङ सेमिफाइनमा प्रहरीलाई मिक्स टिम च्याम्पियन →
भरत र नवयुग अमेरिका जाँदै मंसिर २५, २०७४
यू डायमन्डलाई महिला भलिबल उपाधि मंसिर २५, २०७४
महेन्द्र रत्नलाई भलिबल उपाधि मंसिर २५, २०७४
साफ यु–२० च्याम्पियनसिपमा नेपालका दुई रेफ्रीले पनि खेलाउने मंसिर २५, २०७४
टिवाईटी कप शुरु, पेनाङ र कारोको बराबरी मंसिर २५, २०७४
अक्सफोर्ड बन्यो क्रिमसन कप च्याम्पियन मंसिर २५, २०७४